Indlela yokufumana i-backlink esemgangathweni ngaphandle kwemisebenzi ye-spammy?
I-backlink isebenza njengento ebalulekileyo yokubeka iinjinjini ezininzi. Ibonisa igunya lommandla othile kunye nexabiso layo kubasebenzisi. Ukuba ufuna ukwakha umkhankaso wokwenza uphando lweenjini zokukhangela kwiwebhusayithi yakho kwaye ngokuqhubekayo ufumene i-traffic organic tracker, kufuneka uhlawule ngokukhethekileyo isicwangciso sakho sokwakha isixhumanisi. Umgaqo oyintloko omele uwalandele kukuba ubunjani boqhagamshelwano lwangaphakathi bubaluleke kakhulu kwiGoogle ngaphezu kobuninzi bawo. Ngamanye amagama, i-backlink ephezulu kakhulu kwiiwebhusayithi ezihloniphekileyo onayo, idumela eliphezulu oya kufumana emehlweni eenjini zokukhangela kwaye emva koko ophakamileyo uya kubeka kwi-SERP.
Namhlanje udibanisa iindlela zokwakha eziqhelekileyo ezinxulumene nemisebenzi yobuqhetseba be-spammy eyenzelwe ukuphula izikhokelo ze-Google. Nangona kunjalo, kufuneka yamukelwe ngendlela enjalo. Kukho nezinye iindlela ezininzi zokwakha izixhobo ezifanelekileyo kunye nezifanelekileyo eziza kuphucula i-website yakho ye-SEO ngaphandle kogaxekile kwezinye iisayithi. Ukuba isayithi yakho ibekwe kwindawo ephoxayo okanye ngokuphambene nendawo yokuncintisana yemakethe, ingaba nzima ukuba ufumane i-backlinks esemgangathweni. Nangona kunjalo, kukho izicwangciso zokwakha izixhumanisi ezinokubangela ukuba kube lula kuwe kwaye kukuncede ufumane i-backlinks esemgangathweni. Makhe sixoxe ngeendlela ezi zilandelayo.
Uvumeleke ukufikelela ngokugcweleyo kwiinkcukacha ezithintelayo kumqhubi wakho kwiikhompyutha ezahlukeneyo okanye ngesandla ukukhangela i-web yeekherite ezithile. Akukhona kuphela wena ongathanda ukuphucula ukubonakala kwakho kwishishini kwi-intanethi kwimiphumo yosesho, kodwa ukhuphiswano lwakho lusebenza kuwo, ngakumbi abo banezikhundla eziphezulu kwaye bekhona kwimarike ngaphezu konyaka omnye.Unokwenza umgudu wokufumana uluhlu lwabaxhasi be-backlink yakho kwaye ufumane umgangatho ophezulu kubo. Yimicimbi esemthethweni ngokupheleleyo engayiphuli imithetho yeGoogle. Nangona kunjalo, cinga nje ukuba ingaba luncedo njani kwiprogram yakho yokulungiselela. Ngokuboleka i-backlinks yomncintiswano, unokufumana amathuba amatsha okuqhagamshelanisa kunye nokuphucula i-SEO yakho.
Ukuze uqalise ngophando lwe-market niche, kulungile ukufuna i-TOP TOP five five primary competitors kwi-niche yakho.Ezi website zineprofayili engcono kuneyona yakho, kwaye apha unokufumana i-backlink ephezulu kumgangatho wakho.
Ngokukhawuleza xa ufumana izikhuphiswano zakho eziphambili, kufuneka uqale uhlalutye i-backlinks yabo. Ukwenza lula lo msebenzi, ungasebenzisa izixhobo zokusebenza ezikhoyo ezifana ne-Semalt Auto SEO, i-Monitor Backlinks okanye i-Moz.
Udinga ukongeza izizinda zakho zokhuphiswano kwisinye sezi zixhobo, sebenzisa iimetriki ezinikezelwe ukucacisa ukuba zeziphi iindlinks ezifanele ukuboleka. Ungazami ukuziphindaphinda zonke njengoko zikhangeleka ukukrokra kwaye akuzona zonke izixhumanisi zazo eziphezulu. Kuyinto eqhelekileyo ukuba yonke imithombo yewebhu inezixhumanisi ezimbi, kwaneendawo eziphezulu ezigunyazisiweyo kunye nekhasi eliphezulu le-PageRank linakho. Njengoko ubona umfanekiso jikelele, kufuneka uboleke kuphela ezo zixhumanisi ezinegunya eliphezulu. Njengomthetho, ngakumbi kunzima ukufumana i-backlink kwiwebhusayithi, ixabiso eliphakamileyo linalo.
Ungaqwalasela ifom yesigunyaziso semimandla apho abaqhubi bakho bafumana ukuxhunywa. Ukujonga le ngcaciso, ndikucebisa ukuba usebenzise ezi zixhobo ezimbini zokuhlalutya zobugcisa onokuzifumana kwi-intanethi - iSemalt Web Analyzer kunye neMoz Domain Authority. Ngokufumana ezi methrikhi ezixabisekileyo, unokuqonda ukuba ezo ziza zidibanisa kwiiwebhusayithi ze-third party. Nika ingqalelo ekhethekileyo ekuhambeni izixhumanisi njengoko zinenani elikhulu kwi-injini yokukhangela injini.
Xa ufumene iwebhsayithi eneemetriki ezidibeneyo zakho, kufuneka uhlolisise ukuba ezi ndawo zichaphazelekayo kumashishini akho okanye. Ngaphezu koko, kufuneka uqaphele indlela okhuphisana ngayo naloo nxu lumano. Kufuneka ukhangele ukuba ingaba ibhulogi yokuposa, inqaku okanye inkcazelo kwiimvakalisi ezibini. Cinga ukuba unako ukubonelela le website ngekhwalithi kunye nomxholo onxulumene nomxholo kunye nokuba ngumxhasi.
Hlaziya umxholo apho kubhekiswe khona abakhuphiswano bakho
Akunako ngokwaneleyo nje ukuhlola i-niche yakho yemakethe. Ukuze uzuze kwi-backlinks yabo, kufuneka ukwazi apho igama labo begama likhankanywe kwiwebhu. Ungaqwalasela olu lwazi usebenzisa izixhobo ezichazwe ngaphambili. Fumana konke okukhankanywe kwenkampani yakho yomkhuphiswano uze uzame ukuba phambili kwabanye. Ngokwenza njalo, uya kuphucula amathuba akho okufumana i-backlink ephezulu.
Yenza umkhankaso wokwakha ikhonkco kunye ne-infographics
I-Infographics yindlela efanelekileyo yokubonisa iinkcukacha zenkcukacha ngokufomathiweyo. Abamemezeli be-intanethi abaziwayo njengeHuffington Post, i-Entrepreneur, i-Forbes kunye nabanye basebenzisa i-infographics kumacandelo abo rhoqo. Le ndlela yokubonisa ulwazi ibaluleke kakhulu kwisakhiwo soqhagamshelwano kunye nokuqhuba ukuhamba kwindlela yezentlalo njengoluhlobo lomxholo onokubaluleka kakhulu.
Sebenzisa izibhengezo zeendwendwe ukuze ufumane i-backlinks esemgangathweni
Ukubhengezwa kweendwendwe ngethuba elifanelekileyo kulabo abathanda ukuphucula ubume babo bekhompyutha kwi-intanethi. Ngokusebenzisa le ndlela yokwakha ikhonkco, ungakwazi ukusebenzisana nabathengi bakho abanakho ukuseka ubudlelwane obuhle nabo. Kukho inkolelo evakalayo yokuba i-Google ayibongi le ndlela yokufumana ii-link zangaphakathi. Nangona kunjalo, i-Google ngokwayo iyamkela abaxhasi beendwendwe. Yingakho unganakhathazeka malunga nezigwebo ukuba izithuba zakho zezivakalisi zingaphelelwanga ngeentengiso kunye nezixhumanisi zogaxekile. Qinisekisa ukuba ushicilele umxholo ophezulu ophezulu kwizithuba zakho zezivakalisi ezingaba luncedo kubafundi kwaye kuya kubakho ukuguqula kubaxhasi bakho. Ngaphandle koko, lobu buchule bokwakha i-link kuya kuba yingenanto kwiwebhusayithi yakho SEO.
Yakha isakhiwo sokudibanisa sangaphakathi
Ukuze uqiniseke ukuba uza kufumana inzuzo kwikhankaso yokwakha ikhonkco, kufuneka udale isakhiwo esiqinileyo sokudibanisa ngaphakathi. Akuyi kunika isikhokelo ngokukhawuleza, kodwa kuya kuphucula amava omsebenzisi kwisayithi lakho kwaye ikunike ithuba lokwakha iziqulatho ezizalisekisa i-anchor text text. Ukugqiba
Ukugqiba, ndingathanda ukuphawula ukuba akukho mfuneko yokuthenga iikhonkco okanye ukusebenzisa ezinye iindlela zokuhlawula kunye nokukhwabanisa ukudala umkhankaso wokwakha unxibelelwano. Ungakwazi ukufikelela lula kwiinjongo zakho ukuphumeza iindlela ezikhankanywe ngasentla. Ziluncedo, ziphumo kwaye, yintoni eyona nto ibhetele, ukuyisebenzisa kodwa awuyi kufumana izigwebo zeGoogle. Yiba nomonde kwaye uphikelele njengoko inkqubo yokuqhagamshelanisa unxibelelwano ingaba yidla ixesha kwaye ilukhuni. Nangona kunjalo, ekuhambeni kwexesha, uya kufumana ukubuyela okuphezulu kunotyalo-mali Source .